सानिमाको आइपीओ भोली बाँडिने, कति फर्कदैछन खाली हात ? - सिम्रिक खबर
अजरबैजानविरुद्ध जारी युद्धमा मृत्यु हुने सैनिकको संख्या ७२९ पुग्यो हेर्नुहोस् आईफोन इलाभेन र आईफोन ट्वेल्भमा कुन छ सबै भन्दा राम्रो चीनमा बनेका चार खोप तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा प्रवेश एसयूभी जिम्नीको नयाँ संस्करण नेपाल आउने लगभग फाइनल भइसक्यो नेपाल टेलिकमले झण्डै डेढ दर्जन भाषामा आफ्ना सेवाको सन्देशहरु दिँदै रोबोट पत्रकार शियाओ नान
सानिमाको आइपीओ भोली बाँडिने, कति फर्कदैछन खाली हात ?
काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गरेको प्राथमिक साधारण सेयर (आईपीओ) असोज ३० शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ । कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एसिया क्यापिटले यस कम्पनीको आईपीओ प्रिअलोटमेन्ट बुधबार गरिसकेको छ । पूर्ण बाँडफाँड भने धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाए शुक्रबार बिहान ८ बजेका लागि तयारी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले निष्कासन गरेको कुल ३० लाख कित्ता साधारण सेयरमध्ये एक लाख २० हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि र १ लाख ५० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको हो ।
कम्पनीले असोज २१ देखि २५ सम्म सर्वसाधारणका लागि २७ लाख ३० हजार कित्ता सेयर बिक्रीका लागि आवेदन खुलाएको थियो । त्यसमा आठ लाख ८३ हजार ६२३ जनाबाट एक करोड ९० लाख १२ हजार ३४० कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको जारी पुँजी एक अर्ब रहेको छ । सर्वसाधारणलाई जारी गरेको सेयर बिक्री पछि यसको पुँजी एक अर्ब पुग्ने भएको छ । गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २.६६ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १०६.३९ रहेको छ ।